Akoho nasiana sesika legioma
Akora ilaina · Akoho lehibe 1 · Karaoty 4 · Tongolo 4 · Voatabia 6 · Sakay · Dipoavatra sys ira · Poavrao · Poarao · Selery · Persily · Rano · Tongolo gasy · Haricot vert · Menaka
1. Diovina tsara ny akoho ary esorina ny ao anatiny
2. Totoina ny tongolo gasy, ny sakay sy ny tongolo be.
3. Atambatra miaraka aminy ny menaka dia zaraina telo ireo
4. Arotsaka ao anaty lovia jobo lehibe ny akoho dia asiana amin’ilay hanitra iray voalohany dia asiana sira
5. Avela hipetraka mandritra ny ora iray
6. Tetehina efamira madinika ny tongolo, voatabia, karaoty sy haricot verts.
7. Tetehina manify ihany koa ny tongolo gasy, poavrao, persily sy selery.
8. Afangaro ao anaty lovia ireo
9. Tapitra ny ora roa dia asisika ao anatin’ny akoho ireo legioma sy fangaro voaomana ireo
10. Fonosana “papier alu” ny akoho dia ampidirina ao anaty lafaoro
11. Andrahoina eo amin’ny hafanana 175°C mandritra ny 20 minitra eo ho eo
12. Tapitra ny 20 minitra dia avoaka ary hosorana ilay hanitra nafangaro faharoa indray
13. Fonosana ilay “papier alu” indray ary averina ampidirina ao anaty lafaoro amin’ny hafanana 125°c mandritra ny 20 minitra
14. Tapitra indray ny 20 minitra dia jerena raha efa masaka sy mendy. Raha toa ka tsy mbola mendy dia hosorana amin’ilay hanitra fahatelo efa natokana. Fonosana ilay « papier alu » ary averina ao anaty lafaoro mandritra ny 10 minitra indray
15. Rehefa masaka dia aroso miaraka amin’ny ovy nendasina